मुख्यमन्त्री लालबाबु र ऋषि धमला विच भनाभन – राउत भन्छन् ऋषि धमलाले भन्दैमा राजिनामा पर्ने ? – Aawaj Media
आइतबार, २०७५ भाद्र ०३
मुख्यमन्त्री लालबाबु र ऋषि धमला विच भनाभन – राउत भन्छन् ऋषि धमलाले भन्दैमा राजिनामा पर्ने ?
Home /समाचार/मुख्यमन्त्री लालबाबु र ऋषि धमला विच भनाभन – राउत भन्छन् ऋषि धमलाले भन्दैमा राजिनामा पर्ने ?
काठमाडौं, ३१ वैशाख । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भनेको भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर मैले मधेशी दलहरुले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई प्रस्तुत गरेको हुँ । मधेश केन्द्रित दलहरुले अहिले पनि मुलुकका उत्पिडित, जनजाती, दलितसहित सदियौँदेखि उपेक्षामा रहेका जनताको पक्षमा बोल्दै आएको छ । मैले पनि त्यही कुरा गरेको हुँ ।’
यो कुरा त सबै नेपालीलाई थाहा छ नि । मोदीलाई किन सुनाउनुपर्यो ? भनेर पत्रकार धमलाले गरेको अर्को प्रश्नमा राउतले भने,‘मैले उठाएको कुरा नयाँ हो र ? नयाँ कुरा त होइन नि । लामो समय अघिदेखि भन्दै आएका छौँ नि ।’
२ नम्बर प्रदेशका जनताको चाहना र भावनाअनुसार मुख्यमन्त्री बोल्ने कि नबोल्ने ? भन्दै राउतले उल्टै धमलालाई प्रतिप्रश्न समेत गरे । उनको आक्रोश पोखेका थिए,‘मुलुकका उत्पिडित, जनजाती, दलितसहित सदियौँदेखि उपेक्षामा रहेका जनताले अझै पनि अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । संविधानले नै अपनत्व गराउन नसकेकाले कुरा राखेको हुँ ।’
तराई मधेशका जनताहरुको पीडा आफूहरुले दुनियाँकोसामु भन्दै आएको उनको जिकिर थियो । उनले भने,‘सबैलाई थाहा छ । यसले देशको बेइज्जत गरेको होइन । करोडौँ जनताको भावनालाई मञ्चमा राखेर बताउनु खोजेको हुँ । अहिले पनि संविधानमा रहेका त्रुटीमा सच्याएर मात्रै देशको भलो हुन्छ ।’
संविधानमा भएका त्रुटी सच्याउनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले विभेदकारी कुरा गर्न मिल्छ ? त भनेर धमलाले अर्को प्रश्न तेर्साएपछि उनले भने,‘यो कुरा त नयाँ होइन । पुरानै कुराको निरन्तरता हो । यस प्रदेशका जनताको भावना र चाहनाअनुसार कुरा राख्नु त मेरो कर्तव्य हो । यो एजेण्डा भनेको कुनै पार्टीको होइन । जनताको एजेण्डा हो । संविधानलाई सबैले अपनत्व गर्ने एजेण्डा हो । नागरिकलाई भेदभाव गरेर बनेको संविधान सबैको हुनै सक्दैन ।’
संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिकता आफूहरुले स्विकार गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले वर्तमान संविधान सबैको संविधान बन्न नसकेको बताए । उनले थपे,‘जुन कुरा मैले उठाएको छु, त्यो कुरा अहिलेपनि जहाँपनि भन्न तयार छु । संविधानलाई सबैको अपनत्व गराउनुछ भने संविधान संशोधन अपरिहार्य छ ।’
सत्य कुरालाई कसैलेपनि दबाउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै राउतले केही समयका लागि बहुमतले दबाउन सकिएपनि त्यो सँधै दबाउन नसकिने बताए । उनले थपे,‘झुटो कुरालाई पनि साँचो बनाउन सकिएला । तर झुटो कुरालाई सधैँभरी साँचो बनाउन सक्नुहुन्न । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’ सबै जनताले समान अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उनको जिकिर छ ।
तर नेपालको संविधान त उत्कृष्ट संविधान हो नि ? भनेर धमलाले गरेको अर्को प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘संविधान त ४७ सालको पनि उत्कृष्ट नै थियो नि । तर समाप्त भयो नि । अहिलेको संविधानलाई पनि जनताको चाहनाअनुसार करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
वर्तमान संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री बनेपछि आफू विना तागतको मुख्यमन्त्री रहेको उनको गुनासो छ । उसोभए तपाई राजिनामा दिनुहुन्छ ? त भनेर धमलाले गरेको चर्को प्रश्नमा उनले आक्रोश पोख्दै भने,‘किन राजिनामा दिने ? तपाईले भनेर राजिनामा दिने हो र ? मैले त लाखौँ जनताको माझमा आफ्नो कुरा राखेको हुँ । लाखौँ जनताले ताली बजाएको सुन्नुभएन ? मधेशका सम्पूर्ण उत्पिडित समुदायले मेरो कुरा सुनेर ताली बजाएका छन् । मैले सही भनेँ वा गलत भन्ने कुरा जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् ।’
अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस :
प्रतिबन्धित ५ सय र हजारको भारु नोट मोदी नेपाल भ्रमणमा आउदा पनि चलेन !
नायिका करिश्मा मानन्धरकी छोरीले चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यू गरिन !
So why Even The Greatest Cost-free VPNs Are Not A Risk Value Taking
विधाहरू Select Category Sports Betting Uncategorized VPN अन्य अर्थ/बाणिज्य खेलकुद जीवनशैली धर्म र दर्शन प्रविधि ब्लग मनोरन्जन यात्रा राजनीति रोचक विचार/दृष्टिकोण विश्व समाचार समाज साहित्य स्वास्थ्य